प्रेम र रतिरागमा पश्चिमाहरू::देश र जनताप्रति समर्पित
यौ*न मानिसका लागि सदैव कौतूहलको विषय रहँदै आएको छ । पूर्वीय समाजमा अझै पनि मानिसहरू यो विषयमा खुलेर कुरा गर्न चाहँदैनन्, तर पश्चिमा समाजमा भने यो विषयमा खुलेर कुरा गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा त्यहाँका मानिसहरू आफ्ना आकांक्षालाई सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गर्छन् र सोहीअनुरूपको व्यवहारसमेत गर्छन् । यही सन्दर्भमा क्यानाडाको टोरन्टोबाट प्रकाशित हुने अखबार द डायलगले प्रेम र यौ*नसम्बन्धी आफ्नो वार्षिक सर्वेक्षण लभ एन्ड सेक्स सर्भे–२०१९ सार्वजनिक गरेको छ । सानो स्याम्पलमा आधारित उक्त सर्भेले खासगरी मानिसहरूको रतिराग र प्रेमका विषयमा व्याप्त भ्रमहरू चिर्ने प्रयास गरेको छ ।
प्रेम कि यौन ?
यो प्रश्नमा सहभागी ५४ प्रतिशत मानिसले आफ्ना लागि प्रेम र यौन दुवै समान रुपले महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । त्यसैगरी ३७ प्रतिशतले यौ*नभन्दा प्रेम महत्त्वपूर्ण रहेको बताए भने ८ प्रतिशतले यौ*न तुलनात्मक रूपमा बढी महत्त्वपूर्ण रहेको उक्तर दिए ।
सर्वेक्षणका त्रममा ५७ प्रतिशत महिलाले रोमान्चकारी यौ*नजीवनलाई महत्त्व दिए भने ४१ प्रतिशत पुरुषले मात्र त्यस्तो सम्बन्धमा रुचि देखाए ।
कति समयपछि ?
एक–अर्कासँग परिचय भएपछि वा प्रेममा परेको कति समयपछि यौ*नसम्पर्क राख्ने भन्ने प्रश्नमा ३३ प्रतिशत पुरुषले पहिलो परिचयमै यौ*नसम्पर्कको चाहना राख्ने गरेको बताए भने २९ प्रतिशत महिलाले मात्र त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकार्य हुन सक्ने बताए । त्यसैगरी २२ प्रतिशत पुरुष तथा २० प्रतिशत महिलाले कुनै पनि मानिससँग परिचय भएको २–३ पटकको हेलमेलपछि मात्र अन्तरंग सम्बन्ध स्वीकार्य भएको बताए । उता ७ प्रतिशत महिला तथा १ प्रतिशत पुरुषले मात्र आफ्ना लागि यौ*नसम्पर्क विवाहपछिको कुरा भएको बताए ।
कसले बढी ढाँट्छ ?
यो प्रश्नमा महिलाहरू पुरुषभन्दा अगाडि देखिए । सर्वेक्षणअनुसार ३३ प्रतिशत महिलाले आफ्नो यौ*न साथीलाई ढाँटेको पाइयो । उनीहरूमध्ये १८ प्रतिशतले आफ्नो साथीलाई दोस्रो पटक भेट्न नचाहेको बताए । त्यसैगरी २६ प्रतिशत पुरुषले आफ्नो यौ*न साथीलाई ढाँट्ने गरेको सर्भेले बताएको छ । उनीहरूमध्ये ९ प्रतिशतले आफ्नो यौ*न साथीलाई दोस्रो पटक भेट्न नचाहेको बताए ।
कृत्रिम खेलौनाको आनन्द
सर्वेक्षणमा सहभागी ७१ प्रतिशत महिला तथा ५७ प्रतिशत पुरुषले यौ*न खेलौनामार्फत आनन्द प्राप्त गर्ने गरेको बताए । उनीहरूमध्ये ५७ प्रतिशतले डिल्डो (कृत्रिम लिं*ग) तथा ४५ प्रतिशतले ह्यान्डकफ्स (हातमा हतकडी लगाएको अवस्था) प्रयोग गरेको देखिएको थियो ।
कुन ठाउँमा ?
सर्वेक्षणमा सहभागीहरूमध्ये ४७ प्रतिशतले सार्वजनिक स्थलमा गरिने संसर्ग बढी आनन्ददायक हुने बताए भने तीमध्ये ३१ प्रतिशतले सार्वजनिक ठाउँमा गरिने हस्त*मैथुनले बढी आनन्द दिने जानकारी दिए ।
कस्तो पहिरन आकर्षण ?
यो प्रश्नमा सहभागी २४ प्रतिशतले छोटा तथा डिजाइनर पहिरनले यौनसम्पर्कप्रति आकर्षित गर्ने बताए भने तीमध्ये पनि ५ प्रतिशतले सुगन्धित अन्तर्वस्त्रबाट पनि आफू उत्तेजित हुने जानकारी दिए ।
सर्वेक्षणमा सहभागी २६ प्रतिशतले के स्वीकार गरेका छन् भने उनीहरूले आफ्नो अन्तरंग सम्बन्धको चलचित्रसमेत बनाएका छन् । त्यस्तो चलचित्रमा २६ प्रतिशतले मुखमैथुनलाई मात्र फिल्मांकन गरेको बताएका छन् ।
यौन आनन्द प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा हरेक मानिसको आ–आफ्नै रुचि हुन्छ । सर्भे भन्छ :
 ९ प्रतिशत मानिस दोहोरो (योनि र गुदद्वार) यौ*नसम्पर्कको अपेक्षा राख्छन् ।
 १२ प्रतिशत मानिस सामूहिक यौ*नसम्पर्कको अपेक्षा राख्छन् ।
 १२ प्रतिशत नै मानिस साथीबाट हिंसक व्यवहारको अपेक्षा गर्छन् ।
 ३६ प्रतिशत महिला आफ्नो तुलनामा अग्लो र बलियो पुरुषसँग यौ*नसम्पर्कको चाहना राख्छन् ।
 ४५ प्रतिशत महिला यौ*नसम्पर्कका बेला अर्को पक्षबाट आफूलाई दबाएको वा तुच्छ व्यवहार गरेको रुचाउँछन् ।
 ५१ प्रतिशत महिला यौ*नसम्पर्कका बेला पुरुषले आफ्नो गुदद्वारमा औंला प्रवेश गराएर घुमाएको मन पराउँछ ।
 ४४ प्रतिशत महिला हरेक पटक आसन परिवर्तन होस् भन्ने चाहन्छन् ।
 ७४ प्रतिशत पुरुष हरेक पटक नयाँ साथीको चाहना राख्छन् ।
इ कान्तिपुर बाट